Inzuzo kunye nokulimala kwi-oxygen cosmetics
Namhlanje, phakathi kwabasetyhini (kwaye kungekhona kuphela), i-oxygen cosmetics ixhaphake kakhulu. Kwabaninzi, kuyimfihlakalo indlela umntu anokubeka ngayo, umzekelo, kwi-krimu into eyenziwa yi-gas. Nangona kunjalo, izixazululo ze-cosmetology zanamhlanje zixazululwe le ngxaki. Njengoko abathwali be-oxygen, i-aquaftem okanye i-carbons e-perfluorinated often used. Ekubeni i-oksijini ngokwayo iyisisombululo esinamandla kakhulu, ngokuqhelekileyo i-coenzyme Q 10 okanye iivithamini A ne-E zongezwa kwizonyango ezinjalo. Abakhiqizi be-oxygen cosmetics bathi le mveliso yezityalo zincinci nje ngeengxaki ezininzi zeengcobo. Abaninzi bakholelwa ukuba kukho inzuzo, kwaye inobungozi kwi-oxygen cosmetics. Ingaba kunjalo, kwaye akuzona ezi zimonyo?
Inzuzo kunye nokulimala kwezi zimonyo
Ukwenzela i-oxygen cosmetics ithi i-oksijini ivuselela i-immunity, kwaye ngenxa yoko, ulusu lukhuselwe kwimiphumo engozi yendalo. Ngenxa yoksijini kwesikhumba, ii-collagen ezintsha zenziwe. Naliphi na umfazi owaziyo ukuba le micimbi ibonelela ngokukhawuleka kwesikhumba, kwaye, ngokufanelekileyo, emva kokusebenzisa i-oxygen cosmetics, imibimbi kufuneka ibe ngaphantsi. Enye inzuzo ye-oxygen cosmetics iyincedo kwesikhumba sengxaki. Ngombulelo kwiqumrhu eliphambili, i-oksijini, izimonyo ezinjalo zineempembelelo zokulimala kunye nezichasayo. Ukongezelela, abantu abaneengxaki (kwaye kungekhona nje ingxaki) isikhumba siqaphela ukukhanya okubi kunye nobubi. I-oxygen cosmetics yenzelwe ukusombulula le ngxaki. Emva kokusetyenziswa kwayo, umbala wesikhumba unxweme kwaye uba mhle kakhulu, itoni yesikhumba ikhuphuka, iya kuba yinto eninzi.
Ukongeza kwezi nkcukacha ezingentla, i-oxygen cosmetics inokuba luncedo kakhulu ekulwa nomntu "onqabileyo". I-oksijeni itholakala kwimveliso eninzi ye-cellulite.
Uninzi lwe-cosmetologists lubona ukusetyenziswa kwe-oxygen cosmetics njengento ebalulekileyo, ekubeni i-oksijeni ivela emoyeni, ngokuyinhloko kwimiphunga, kwaye isikhumba saso sinokubaluleka kakhulu. Ukongezelela, uluhlu lwesakhelo, oludla ngokugqithiseleyo ebusweni babo bonke abesifazana, lukhusela nokufakelwa kwe-oxygen emoyeni. Ngokweminyaka yobudala, ukusilala kwe-oksijini kwesikhumba kuya kubonakala ngakumbi kwaye kukhangeleke. Ngenxa yokungabikho kwe-oksijeni, ulusu lukhula ngokukhawuleza. Ukongezelela, kwimeko enjalo, iinkqubo zokubuyiselwa kunye nokuhlaziywa kwesikhumba zityhutyha, nto leyo ibangela ukuguga ngokukhawuleza.
Kuze kube namhlanje, ezininzi iinzululwazi zikholelwa ukuba ukusetyenziswa kwe-oxygen kwi-cosmetology akuyona nto inobungozi. Nangona kunjalo, kuhlale kulungele ukukhumbula ukuba "kwiphononti yeyeza, kunye ne-spoonful of poison," ngoko, izazi zezilwanyana azicebisi umntu ukuba asebenzise kakubi i-oxygen cosmetics. Naluphina i-cosmetic ibhinqa elikhethayo ngokuhambelana nomhlobo wesikhumba sakhe. I-oxygen cosmetics ayinjalo. Kungcono ukudibanisa ne-cosmetologist enamava, oye wahlalutya imeko yesikhumba sakho, uya kunika iingcebiso ekukhetheni i-oxygen cosmetics eziyimfuneko. Ukuba oku akunakwenzeka, kufuneka ufune ukuba ubuncinane ulusu lube lumile okanye luyile. Emva koko izimonyo ezikhethiweyo ezichanekileyo ngeoksijini ziya kuzisa inzuzo enkulu kunesikhumba sakho. Ngaphambi kokusebenzisa i-oxygen cosmetics kubaluleke kakhulu ukucocekisa ngokucacileyo isikhumba semilahla. Kungcono uze usebenzise isitshalo, ngoko ususa iinqununu ezinobumba ukusuka kwesikhumba, kwaye izixhobo ezisebenzayo ze-oksijeni zezimonyo ziya kuba lula ukufikelela kwiindawo ezinzulu zolusu.
I-oxygen cosmetics yigama elitsha kwi-cosmetology. Inokuba luncedo kakhulu kumantombazana amancinci, kunye nakwabesetyhini abavuthiweyo.
Indlela yokwahlula i-perfume yasekuqaleni evela kwi-fake: sifunda ukukhetha i-brand brand
Intour lip liner
Iingcobo ngezandla ezisekhaya
Indlela yokuziphatha nomntwana womyeni kumtshato wokuqala
I-Pizza: imbali, iindlela zokupheka
Indlela yokwenza umona kumthande
Umgca omtsha weengubo zamabhinqa ezivela eGiorgio Armani
Ukuphuhlisa nokutya komntwana emva konyaka omnye
Omelette ne avocado
Ingqungquthela yokubambisana - nembali yokubonakala
Indlela iNyuuta Baidavletova yaziwa ngayo
Indlela yokujonga i-manizer kumntu
IHoroscope yeNtombikazi -kazi kaFebhuwari 2017
Impilo engekho ngokupheleleyo ngokutya okufanelekileyo
I-pepper ebisiweyo enezinto kunye nemifuno